मानिस कसरी प्राप्त गर्ने?
रोमांस उपन्यासहरू पढ्ने वा चलचित्रहरू हेर्दै, हामी अचम्म लाग्यौं कि यो मुख्य पात्रले कतिपय वाक्यांशहरू वा इशाराहरूसँग कसरी मानिस प्राप्त गर्न सक्छ? अनि निस्सन्देह, हामी तुरुन्तै बिस्तरमा एक व्यक्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने जानकारीको बारेमा जान्छौं र कुन शब्दहरू र वाक्यांशहरूले बलियो यौन प्रतिनिधिको प्रतिनिधिलाई नेतृत्व गर्छन्, पूर्ण रूपमा बिर्सन्छ कि त्यहाँ कुनै स्पष्ट एल्गोरिथ्म छैन, र त्यहाँ हुन सक्दैन - तपाईं सम्झनुहुन्छ, कि प्रत्येक व्यक्ति फरक छ? कसैले गर्दनमा चुम्बन गरेको छ, र कसैले तपाईंको कानमा एक सज्जन श्वास मनपराउँदछ कि तपाईं कसरी तुरुन्तै उसको साथमा जान चाहनुहुन्छ। यसैले, केवल केहि सामान्य बिन्दुहरुलाई बुझ्न सक्छ कि सबै महिलाहरु मा महिलाहरु को अधिकांश भन्दा धेरै मान्छे पुरुषहरु लाई, र बाहिर जान्छ कि कसरि बिस्तर मा एक आदमी ले आफैं र एक विशिष्ट मान्छे संग हुनेछ।
कसरी मानिसलाई प्राप्त गर्ने?
आइपुगे पुरुष पुरुष र सुनवाई कसले गर्छ, जसले महिलालाई मनपर्छ।
लुगा लगाएर महिला शरीरको आकर्षक कल्पहरू लुकाउँदैनन्। अर्थात्, चीजहरू जुन तपाईंको आंकडा सही स्थानहरूमा फिट हुन्छ: पोप, छाती र जांघ। एक लामो स्कर्टमा नर लग लामो कटौती पनि आकर्षित गर्नुहोस्, र यदि एक खण्डमा त्यहाँ मोजाबाट एक लोचदार पछाडिको कहिलेकाहीं देखाइनेछ, त्यसपछि प्रसव प्रदान गरिन्छ। र अझै पनि धेरै आकर्षक एक बेरोजगार बटन संग ब्लाउज हो जसले खुल्यो र खुसीको अद्भुत दृश्य खोल्न धम्की दिन्छ।
पुरुषहरू कल्पना गर्न मन पराउँछन्, तर किनकि तिनीहरू महिलाको हेर्न मन पराउँछन् जब तिनी आधा नग्न हुन्छन्, जब शरीरको आँखा भागहरूमा बन्द गर्न सकियो।
अनि निस्सन्देह, एक ठूलो भूमिका अंडरवियर र यसको रंगले खेलेको छ। लिनन स्त्री, स्वादिष्ट, लुसी हुनु पर्छ, र अर्ध-खेलकुद प्रकारको केहि कुरा बुझ्न सकिँदैन जुन कुनै चाहना छैन। अंडरवियरको रंगको रूपमा, त्यसपछि आकर्षणमा पहिलो स्थान रातो (क्रिमियन) र कालो हो। र कम सेक्सी सेक्सी नीलो अंडरवियर हो।
लुगा लगाएर लुगा लगाएर, अब चल्नको लागि चल्दछ। सबै महिलाहरू पुरुषहरूको नेतृत्व गर्ने शब्दहरू जान्न चाहन्छन्, तर सबै मानिसहरूका लागि उपयुक्त कुनै अनिवार्य उत्तेजना छैन। यसकारण, केवल परीक्षण र त्रुटिले तपाईं आफ्नो मान्छे प्राप्त गर्न कुन शब्दहरू बाहिर जान्छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सच, यो सम्झना लायक छ कि ज्यादातर मान्छे स्पष्टता जस्तै, र यसैले पारदर्शी संकेतले वांछित प्रभाव दिन सक्दैन। तर अक्सर फ्रान्क कन्सेन्स भन्दा बढी "आँसु-क्रेन" आ आँसुहरू। प्रयोग र सही टोन खोज्नुहोस्।
यौन सम्बन्धमा, तपाईंलाई मानिसलाई देखाउन चाहानुहुन्छ कि तपाई पनि यो मनपर्छ, त्यो सबै कुराले बेकार गर्दैन। तपाईंको भागमा प्रतिक्रियाको कमीको लागि (र प्रतिक्रिया र आवाज समर्थन) अभ्यास दोहोरिने कुनै पनि इच्छालाई हतोत्साहित गर्न सक्छ। अन्तमा, न केवल तपाईं सेक्सी र वांछनीय महसुस गर्न चाहानुहुन्छ।
धेरै महिलाहरूले कसरी मानिसलाई चुम्बन गर्ने भन्ने बारे सोच्न सक्छन्। यो सजिलो छ, तपाईलाई आफ्नो मान्छेको बिन्दु खोज्न आवश्यक छ, जसमा चुम्बनको सबैभन्दा मनपर्दो हुन्छ। यद्यपि केही मान्छे भन्छन् कि सर्वोत्तम चुम्बनले यौन हो, तर यो एक राम्रो मान्छे बनाउन को लागी एकमात्र तरिका होइन। चुम्बनबाट धेरै mlejut र गर्दनको सजिलो सजिलो, लगभग एक पेटको बटन र जेनेटिटल बीच पेटमा सबै प्रकारका स्पर्शहरू। एर, निपल्स, भित्री जांघ, औंलाहरू - यी कुनै पनि ठाउँमा तपाईंको ईरेजन्य व्यक्ति हुन सक्छ, तपाई यो जिब्रो र होंठको सहायता संग सबै केहि अन्वेषण गर्न मात्र छ।
कहिलेकाहीँ मानिसलाई उनको यौन कल्पनाको बारेमा मायालु एकलाई सोध्न पर्याप्त हुन्छ। यदि तपाईं उहाँलाई कुरा गर्न को लागी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उसले खुशी संग कार्यमा जानेछ।
परिस्थितिको लागि, हामी अक्सर अविवाहित रूपमा कामुक रूपमा विचार गर्दै एक अंतरंग गोर्खा सिर्जना गर्न प्रयास गर्छौं। हाम्रो लागि यो हुन सक्छ, तर लगभग सबै पुरुषहरूलाई यो सबै आवश्यक छैन, यसको विपरीत, एक कोठामा उज्ज्वल प्रकाश अर्ध-अन्धकार भन्दा राम्रो छ। किनभने कुनै पनि नग्न प्रिय महिलाको विचार भन्दा बढी उत्तेजित हुन सक्छ।
एक विवाहित मान्छे संग प्रेम मा फिल - के गर्न को लागी?
के तपाइँ छान्नु भएको छानिएका साथीहरुसँग सम्भव छ?
महिलालाई किन मानिसको आवश्यकता छ?
फोटोहरुसाथीमा कसरी राम्रो तरिकाले लाग्ने?
मेनुस्ट्रेशनको बारेमा केटीलाई कसरी व्याख्या गर्ने?
एगप्लैंट रङ्गआउट - स्वादिष्ट गर्मीको व्यञ्जनको लागि उत्तम व्यञ्जन
घरमा पनीर क्यासुलल एक कुटी पकाउने?
स्ट्रीट फैशन 2017 - उपन्यास, रुझान, स्टाइलिश तस्वीरहरु
किस्लिट्टा कोठा - फूल लगाउने बिरुवाको बारेमा सबै कुरा
Erasmus को घर
रोमीको नाम के हो?
मालदीव - रिसोर्ट्स
जमे भएका गर्भावस्था पछि गर्भवती हुन कसरी सम्भव छ?
ऊर्जा बचत लैंपको उपयोग
वजन घटाने को लागि बीओओ को गणना
बिल्लियों को लागि फरिइनाइड
ट्रक्टरमा मात्र स्यान्डल नामहरू के हुन्?
लुम्बिनी रीइन र femoral गर्दन को densitometry
एक ब्लेंडर मा दूध संग केाना ककटेल
आर्थिक सुरक्षा - सिद्धान्तहरू र सुनिश्चित गर्नका तरिकाहरू
किन एक भाइको सपना?
नवजातको टाउकोमा क्रस्ट कसरी हटाउनुहुन्छ?
जिमनास्टिक को लागि बिल्लियों